Idaacada Dowladda mise Idaacada Qaranka?
By ibrahim Aden shire August 21, 2017
Wax weyn ayaa ku jaban. Si aan u fahanno waxa ka qaldan waa inaan fahannaa farqiga u dhexeeyo 'dowlad iyo qaran'. Dowlad waxaa la yiraahdaa dadka talada hayo markaas oo la isku daray. waxay ka koobantahay hay'ado kala duwan waxaana ugu sareeyo madaxweynaha. Baarlamaanku kuma jiro dowladda.
Haddi aynu niri idaacadu waxay ku hadashaa afka dowladda, dowladduna ay tahay mid aysan dadku u dhamayn sidee ku qaadan kartaa magaca qaranka? warka ay tabinayso maahan mid matalo xisbiyadda mucaaradka ah, maahan mid matalo inta badan shacabka soomaaliyeed mana matalo cid walba oo dowladda aan ku jirin sidaa darteed magaca saxda ee mudan in loogu yeero waa 'idaacada dowladda' lagana reebo erayga 'Qaran'.